कसरी Adobe Illustrator को लागी नि: शुल्क प्राप्त गर्न को लागी - Adobe Illustrator को उपयोग को २ तरीकाहरु नि: शुल्क
Photo Retouching Services > Retouching Blog > Nepali Blog > कसरी Adobe Illustrator मुक्त गर्न को लागी
द्वारा Ann Young, Naveen Pokhrel 2021-09-02, Nepali Blog
ILLUSTRATOR मुक्त गर्न को लागी
थाहा छैन कसरी Adobe Illustrator को लागी नि: शुल्क प्राप्त गर्न को लागी तर मासिक सदस्यता प्रति $ २० तिर्नु बिना पेशेवर डिजाइन बनाउन चाहानुहुन्छ? कानून, यसको नि: शुल्क विकल्प, र सबै गोप्य चोरी खतराहरु को उल्ल without्घन बिना Adobe Illustrator मुक्त डाउनलोड को यी दुई सुरक्षित तरीकाहरु को जाँच गर्नुहोस्।
नि: शुल्क इलस्ट्रेटर लाभ
पेशेवर डिजाइन उपकरण
सरल सिक्ने वक्र
अन्य एडोब उत्पादनहरु संग एकीकृत गर्न सकिन्छ
ढाँचा को सबै प्रकार को समर्थन गर्दछ
एडोब फन्ट गर्न सजिलो पहुँच
प्रस्तुतीकरण को लागी प्रयोग गर्न सकिन्छ
एक नियमित आधार मा नि: शुल्क Adobe Illustrator को उपयोग दुर्भाग्यवश असम्भव छ, यद्यपि तपाइँ यो वेक्टर सम्पादक को लागी days दिन को लागी नि: शुल्क परीक्षण गर्न सक्नुहुन्छ, वा तपाइँको स्मार्टफोन मा एक नि: शुल्क Adobe Illustrator स्थापना गर्नुहोस्।
Adobe Illustrator नि: शुल्क परीक्षण7दिन को लागी कुनै सीमा बिना कार्यक्रम को प्रदर्शन को परीक्षण गर्न को लागी एक महान तरीका हो। यो विविधता जो वेक्टर सम्पादक डाउनलोड गर्न को लागी निर्णय गरीएको छैन को लागी उपयुक्त छ।
Adobe Illustrator नि: शुल्क परीक्षण FAQ:
यदि तपाइँ एडोब इलस्ट्रेटर नि: शुल्क परीक्षण को बारे मा कुनै प्रश्न छ, सोधिने प्रश्न खण्ड मा उत्तर को माध्यम बाट हेर्नुहोस्।
के यो एडोब इलस्ट्रेटर CS6 परीक्षण डाउनलोड गर्न सम्भव छ?
सं। Illustrator मात्र र Adobe Illustrator को सबै भन्दा भर्खरको परीक्षण संस्करण हो जुन नि: शुल्क डाउनलोड गर्न सकिन्छ।
ILLUSTRATOR मुक्त परीक्षण शर्तहरु हेर्नुहोस्
एडोब Illustrator मुक्त परीक्षण Illustrator को एक पूर्ण संस्करण हो?
हो। यो सबै प्रकार्यहरु र भर्खरको Illustrator संस्करण को अपडेट छ।
यदि तपाइँ अन्य एडोब उत्पादनहरु मा रुचि राख्नुहुन्छ, को बारे मा अधिक पढ्नुहोस् कसरी नि: शुल्क Lightroom प्राप्त गर्ने र प्रयोग फोटोशप मुक्त ।
के म Adobe Illustrator को लागी छुट पाउँछु यदि म एक विद्यार्थी हुँ?
हो। विद्यार्थी र शिक्षकहरु एक 60% छुट संग सम्पूर्ण रचनात्मक बादल संग्रह मा एक सदस्यता किन्न सक्छन्।
परीक्षण अवधि सकिएमा के गर्ने?
"किन्नुहोस्" खण्डमा जानुहोस् र उपलब्ध योजनाहरु मध्ये एक छान्नुहोस्।
मूल्यहरु को बारे मा अधिक हेर्नुहोस्
Adobe Illustrator नि: शुल्क प्रयोग गर्ने अर्को तरीका
ILLUSTRATOR चित्र को लागी नि: शुल्क
इलस्ट्रेटर लाभ कोर्नुहोस्
अन्य एडोब सफ्टवेयर संग एकीकरण
Adobe Illustrator ड्रा एक सरल र आधुनिक इन्टरफेस मा वेक्टर चित्र को लागी सबै लोकप्रिय उपकरण र कार्यहरु प्रदान गर्दछ। अनुप्रयोग तहहरु र विभिन्न ब्रश समर्थन गर्दछ। Adobe Illustrator, एडोब फोटोशप, एडोब क्याप्चर, एडोब फोटोशॉप स्केच, र Lightroom मोबाइल अनुप्रयोग: ड्रा क्रिएटिव क्लाउड संग्रह को लागी हो, यो निम्न अनुप्रयोगहरु संग मिल्दो छ।
तपाइँ तपाइँको कम्प्युटर मा बनाईएको चित्र पठाउन सक्नुहुन्छ र Illustrator मा भेक्टर रूपरेखा को रूप मा वेक्टर सम्पादन जारी राख्न वा फोटोशप मा स्केच टाँस्न सक्नुहुन्छ। इलस्ट्रेटर ड्रा नयाँ सफ्टवेयर को समर्थन गर्दछ, जस्तै एडोब मसी, पिक्सेलपोइन्ट संग एडोनिट जोट टच, Wacom, FiftyThree कम्पनी द्वारा पेन्सिल, र एप्पल पेन्सिल। यो दबाव संवेदनशील styluses को माध्यम बाट चित्र बनाउन अनुमति दिन्छ। यसबाहेक, यो अनुप्रयोग को लागी धन्यवाद, तपाइँ Behance मा तपाइँको काम प्रकाशित गर्न सक्नुहुन्छ, र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा यो हो कि अनुप्रयोग पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र छ।
तपाइँ Adobe Illustrator समुद्री डाकू संस्करण किन प्रयोग गर्नुहुन्न?
केहि प्रयोगकर्ताहरु लाई लाग्छ कि डाउनलोड र torrents को उपयोग को बारे मा केहि गलत छैन। टोरेंट बाट एक समुद्री डाकू कार्यक्रम डाउनलोड गर्दै, तपाइँ नि: शुल्क एडोब पाउनुहुनेछ। जे होस्, त्यो जहाँ लाभ समाप्त हुन्छ र आपराधिक जिम्मेवारी शुरू हुन्छ। तल, म बिना लाइसेन्स सफ्टवेयर को उपयोग को परिणाम को वर्णन गर्नेछु।
मलाई विश्वास छ कि समुद्री डाकू सफ्टवेयर को उपयोग बाट उत्पन्न सबैभन्दा महत्वपूर्ण परिणाम आपराधिक दायित्व हो। सम्भवतः, तपाइँ मध्ये धेरैले पनी यस्तो कानून को बारे मा अनुमान गर्नुभएको छैन, यद्यपि कानून को अज्ञानता कुनै बहाना छैन, जस्तो कि तपाइँ जान्नुहुन्छ।
कुरा यो हो कि यदि तपाइँ लाइसेन्स बिना सफ्टवेयर डाउनलोड गर्नुहुन्छ, तपाइँ तपाइँको ई-मेल मा धेरै चेतावनी सन्देशहरु अवैध डाउनलोड को परिणाम को वर्णन पाउनुहुनेछ। यदि तपाइँ रोक्नुहुन्न र समुद्री डाकू अनुप्रयोग को दुरुपयोग जारी राख्नुहुन्न, तपाइँको प्रदायक द्वारा निष्क्रिय इन्टरनेट जडान, र तपाइँ सम्मन पाउनुहुनेछ। नतिजाको रूपमा, तपाइँ $ 1000 बाट रकम मा एक जरिवाना तिर्नु पर्छ।
समुद्री डाकू सफ्टवेयर, एक नियम को रूप मा, तपाइँको कम्प्यूटर मा सबैभन्दा ठूलो भाइरस वितरक मध्ये एक हो। अविश्वसनीय स्रोत बाट Adobe Illustrator मुक्त डाउनलोड गरीएको, तपाइँ बिभिन्न भाइरस प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। सबैभन्दा हानिरहित कुरा हुन सक्छ कि हुन सक्छ विभिन्न अनावश्यक कार्यक्रमहरु को स्वचालित स्थापना। यसबाहेक, भाइरस तपाइँको पीसी को प्रदर्शन ढिलो हुन सक्छ। सबैभन्दा गम्भीर नतिजा हो कि तपाइँको अपरेटि system्ग सिस्टम क्षतिग्रस्त हुनेछ वा तपाइँको व्यक्तिगत डाटा चोरी हुन सक्छ।
एडोब कम्पनी लगातार हामीलाई अपडेटहरु संग जो विभिन्न ब्याग सही, बृद्धि वा नयाँ उपकरणहरु लाई जोड्दछ। एAdobe Illustrator ह्याक डाउनलोड गरीएको छ, तपाइँ यसलाई भर्खरको संस्करणमा अपडेट गर्न सक्नुहुन्न र तपाइँ यसलाई अर्को, लाइसेन्स रहित संस्करण (जुन विरलै हुन्छ) डाउनलोड नभएसम्म यसलाई प्रयोग गर्नुहुनेछ।
निःशुल्क को लागी ILLUSTRATOR अपडेट गर्नुहोस्
क्रम मा कार्यक्रम हैक गर्न को लागी, ह्याकर्स स्रोत कोड खोल्ने र यो दरार कार्यक्रम मा कमजोर बिन्दुहरु पाउन। जब कार्यक्रम टुटेको छ, ह्याकरहरु स्रोत कोड यस्तो तरीका बाट सफ्टवेयर लगातार प्रयोग गर्न सकिन्छ कि परिवर्तन गर्नुहोस्। जब स्रोत कोड परिवर्तन हुन्छ, ह्याकर्स केहि उपकरणहरु लाई चोट पुर्याउन सक्छ। नतिजाको रूपमा, तिनीहरू सही ढंगले काम गर्दैनन्, वा बिल्कुल काम गर्न बन्द गर्दछन्। यो साँच्चै ह्याक कार्यक्रम को लागी सामान्य छ।
कुनै ग्राहक समर्थन छैन
एडोब बरु एक गम्भीर कम्पनी हो जसले आफ्ना प्रयोगकर्ताहरुको ख्याल राख्छ। आफ्नो उत्पादन किन्ने, तपाइँ २४/7 समर्थन पाउनुहुनेछ, जुन तपाइँ विभिन्न प्रश्नहरु संग सम्बोधन गर्न सक्नुहुन्छ। समर्थन टीम केहि कार्यक्रम मुद्दाहरु लाई ह्यान्डल गर्दा वा यो वा त्यो उपकरण कसरी काम गर्दछ भनेर व्याख्या गर्न को लागी सहायता गर्दछ। एक समुद्री डाकू छवि सम्पादक संस्करण डाउनलोड, तपाइँ यो सम्भावना को लाभ लिन को लागी सक्षम हुनुहुन्न।
3 Adobe Illustrator नि: शुल्क विकल्प
सबैजना वेक्टर सम्पादक को लागी प्रति महिना $ १० देखि $ from० सम्म तिर्न सक्दैनन्। यही कारणले धेरै स्वतन्त्र डिजाइनरहरु र नियमित प्रयोगकर्ताहरु सस्तो विकल्प को लागी हेर्छन्। यदि तपाइँ भेक्टर ग्राफिक्स को अध्ययन शुरू गर्नुहुन्छ, प्रोग्रामहरु जुन मैले एडोब इलस्ट्रेटर को लागी नि: शुल्क विकल्प को रूप मा चुनेको छु तपाइँको आवश्यकताहरु लाई पूरा गर्न को लागी आदर्श हुन सक्छ। कुनै संदेह बिना, Illustrator सबै मा जीत हुनेछ, यद्यपि मैले नजिकैको छवि सम्पादकहरु जो आधारभूत भेक्टर अपरेशन को लागी उपयुक्त छनौट गर्ने कोशिश गरे।
सुविधाजनक छवि सम्पादन कार्यहरु
पूर्ण रूपमा मुक्त
प्रणाली संसाधन माग
फाइल आयात मुद्दाहरु
Inkscape एक विशेष कार्यक्रम हो जुन सिर्जना र वेक्टर चित्र को प्रक्रिया को लागी डिजाइन गरीएको हो। यो एक सही एडोब इलस्ट्रेटर मुक्त विकल्प हो, जुन प्राय: ब्यापार कार्ड, पोस्टर, योजनाहरु, लोगो, र चित्रहरु डिजाइन गर्न को लागी प्रयोग गरीन्छ। यो बनाउन र विभिन्न उपकरणहरु को माध्यम बाट वेक्टर छविहरु सम्पादन गर्न अनुमति दिन्छ। तपाइँ एक पेन्सिल, कलम, र सुलेख को रूप मा यस्तो उपकरण को उपयोग गरी वस्तुहरु कोर्न सक्नुहुन्छ। यसबाहेक, त्यहाँ विभिन्न आयत, अण्डाकार, बहुभुज, सर्पिल, पाठ संभावनाहरु, र धेरै अधिक छन्। तपाइँ GZIP ढाँचामा ग्राफिक्स खोल्न र बचत गर्न सक्नुहुन्छ।
यसको अतिरिक्त, कार्यक्रम धेरै लोकप्रिय ढाँचा को छवि सम्पादन गर्न को लागी अनुमति दिन्छ, उदाहरण को लागी, SVG, PNG, OpenDocument, DXF, sk1, PDF, EPS, PostScript, आदि Inkscape धेरै उपयोगी कार्यहरु र एक सरल इन्टरफेस संग एक महान उपयोगिता हो। मँ यो एप को लागी सिफारिश गर्दछु, जो ग्राफिक्स बनाउन र सम्पादन गर्न को लागी एक विश्वसनीय कार्यक्रम को जरूरत छ।
GRAVIT मुक्त प्रयोग गर्नुहोस्
वेक्टर सम्पत्ति को ठूलो पुस्तकालय
सरल प्रयोगकर्ता इन्टरफेस
उपलब्ध ब्राउजर संस्करण
प्रारम्भमा, Gravit मा एक आइकन, ब्यानर, लोगो, र अन्य ग्राफिक तत्वहरु बनाउन को लागी एक अनलाइन भेक्टर सम्पादक को रूप मा डिजाइन गरीएको थियो। जे होस्, डेवलपर्स नयाँ कार्यहरु प्रस्तुत र Adobe Illustrator मुक्त परीक्षण को लागी यो विकल्प एक शक्तिशाली ग्राफिक्स उपकरण हो जो अब म्याक, विन्डोज, र लिनक्स प्लेटफार्महरु संग मिल्दो छ। कार्यक्रम वेक्टर ग्राफिक्स प्रशोधन को लागी आवश्यक उपकरण को पूरा सेट छ।
यो तहहरु, वक्र, ज्यामितीय आंकडा, चयन र रूपान्तरण, पाठ, र धेरै अन्य प्रकार्यहरु संग काम गर्न को लागी विभिन्न उपकरणहरु लाई समर्थन गर्दछ। भेक्टर सम्पत्ति को Gravit डिजाइनर पुस्तकालय ब्याज, रूपहरु, इमोजी, र चित्र, जो तस्वीर सम्पादन को समयमा संयुक्त हुन सक्छ। खैर, Gravit एक रेखापुंज ग्राफिक्स सम्पादक को रूप मा प्रयोग गर्न सकिन्छ, किनकि त्यहाँ फसल, मास्किंग, सम्मिश्रण, आकार परिवर्तन, र फिल्टर जोड्ने जस्ता कार्यहरु छन्। सम्पादित कार्यहरु PNG, JPG, वा SVG ढाँचामा सुरक्षित हुन सक्छ।
VECTR मुक्त प्रयोग गर्नुहोस्
व्यक्तिगत खाता एक जरूरी छ
Vectr एक अपेक्षाकृत नयाँ अनुप्रयोग जो छिटो विकास, जोड्ने र विभिन्न प्रकार्यहरु लाई बढाउने हो। यो एक सरल र बुझ्न सकिने तस्वीर सम्पादक हो, जसले तपाइँलाई मानक सदिश संचालन गर्न को लागी अनुमति दिन्छ जस्तै ज्यामितीय आंकडा, वक्र, आदि सम्पादन गर्न को लागी यो धेरै स्तरहरु र पृष्ठहरु छन्, जो परियोजना संगठित गर्न मद्दत गर्दछ। Vectr AI, EPS, SVG, PNG, र JPEG जस्ता ढाँचा फाइलहरु आयात गर्न अनुमति दिन्छ।
यो प्राय एनोटेशन, छवि सुधार, र mockups र चित्र कोर्ने को लागी प्रयोग गरीन्छ। के अधिक छ, यो लोगो, वाटरमार्क, प्रयोगकर्ता इन्टरफेस डिजाइन, वेबसाइट mockups, सामाजिक सञ्जाल ब्यानर, आइकन, र २ डी छविहरु बनाउन को लागी प्रयोग गर्न सकिन्छ। Vectr को लागी धन्यवाद, तपाइँ सरल र बुझ्ने प्रकार्यहरु को उपयोग गरी जुम वेक्टर चित्र बनाउन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम मास्टर गर्न को लागी सजिलो छ र ती को लागी उपयुक्त छ, जो एक वेक्टर संग काम शुरू र चित्रण सम्पादन को सम्बन्ध मा आधारभूत कार्यहरु संग पूर्णतया सन्तुष्ट छन्।
Adobe Illustrator नि: शुल्क डाउनलोड गर्नुहोस्
म्याक/जीत को लागी Adobe Illustrator
एन्ड्रोइड/आईओएस को लागी इलस्ट्रेटर ड्रा
मुक्त गर्न को लागी यो सफ्टवेयर को परीक्षण गर्न को लागी, इजाजतपत्र परीक्षण संस्करण डाउनलोड वा मोबाइल आवेदन को उपयोग गर्नुहोस्।
चित्रकार पाइरेटेड संस्करण
सर्वश्रेष्ठ मुक्त Illustrator विकल्प